एमालेले बनेपा र पनौतीको शपथ बहिष्कार गरेर दिन खोजेको सन्देश के हो ? – मिलिजुली खबर
हिजो बनेपामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण कार्यक्रम नगरपालिकाले आयोजना गरेको थियो । त्यो कार्यक्रम एमालेले बहिष्कार गर्यो ।
पनौती नगरपालिकामा आज शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले नै आयोजना गरेको थियो । यो पनि एमालेले बहिष्कार गर्यो ।
बनेपा र पनौतीमा उस्तै प्रकृतिको आरोप एमालेले लगाएको छ । विज्ञप्ति लगभग बनेपा नगरपालिकाकै कपिपेष्ट पनौती एमाले नगर कमिटीले गरेको छ ।
यी दुबै नगरपालिकामा बैशाख ३० गते सकिएको मतदानबाट नेपाली कांग्रेसका मेयर विजयी भएका छन । उपमेयर दुबै नगरपालिकामा एमालेले जितेको छ । कांग्रेसले एमालेको गड त तोड्यो । तर मेयर जितेपनि बहुमत सदस्य एमालेका विजयी भए ।
बनेपा र पनौतीका एमालेले बहुमतको दम्भ प्रष्टैसंग देखाएका छन । त्यो कुरा उनीहरूको विज्ञप्तिमा लेखिएका भाषाले पनि दर्शाउँछ । शपथ ग्रहण कार्यक्रम नगरपालिकाले आयोजना गर्ने हो । पार्टीले होईन ।
तर एमालेले यो कुरालाई पार्टीकरण गर्यो । पार्टीले नै शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरे जसरी बहुमतको नाममा बहिष्कार गर्यो । जुन कुरा आवश्यक थिएन । किन भने शपथ ग्रहणको समय र स्थान नगरपालिकाले तय गर्ने हो । सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने काम पनि नगरपालिकाकै हो ।
कार्यक्रका बारे फोन गर्दा कुसैलाई अघि, कसैलाई पछि हुनु स्वाभाविक हो । तर जानकारी नै नदिई शपथ कसलाई खुवाउने ? के नगरपालिकाका कर्मचारीले शपथ खाने हो र ? कि यो शपथ पार्टीको हो ? कांग्रेसले खुवाउने शपथ एमालेका सदस्यले किन खाने !
एमाले यी सबै कुराबाट जानकार हुँदा हुदै पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको घमण्ड देखाउन चाहान्छ । किन भने अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आउँदैछ । एमाले नगरप्रमुखलाई सहज ढंगले नगरपालिका सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा छैन । यही सन्देश शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरेर दिन खोज्दैछ ।
अर्थात संवैधानिक हार ब्यहोर्न एमालेले तयार छैन । संख्या देखाएरै कांग्रेसलाई तर्साउने रणनीति एमालेले अंगालेको पाइएको छ । अघिल्लो पटक पनौतीको १२ वटा वडा मध्य ६/६ वटामा एमाले-कांग्रेस विजयी भएका थिए ।
नगरसभामा कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आईरहेको थियो । अघिल्लो पटक कांग्रेसले गरेको काम एमालेले शपथ ग्रहण कार्यक्रमबाटै सुरू गरेको छ । अर्थात् जनताले चुनेर पठाएका अन्य दलका जनप्रतिनिधिलाई नस्वीकार्ने पक्षमा एमालेको दुई पालिकाको गतिविधिले देखाउँछ ।
The right way to Run The ISO Audit WithaData Room